လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး စာအုပ်များ | မေတ္တာရိပ်
← မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး စာအုပ်များ
ဗဟုသုတ သမိုင်းစာအုပ်များ →
လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး စာအုပ်များ	Posted on June 20, 2009	by mettayate နာဂလိုဏ်ဂူ အဓိဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်နှင့် ၀ိပဿနာ
လယ်တီဝိပဿနာ အတွဲ (၅)
လယ်တီဝိပဿနာ အတွဲ (၄)
လယ်တီဝိပဿနာ အတွဲ (၃)
လယ်တီဆရာတော် _ လယ်တီနိဗ္ဗာန်တရားတော်များ လယ်တီဆရာတော် _ အဘိဓမ္မာပရမတ္ထသံခိပ်ကျမ်း သံပေါက်လင်္ကာ Like this:Like Loading...
This entry was posted in ဓမ္မ စာအုပ်များ and tagged ဓမ္မ. Bookmark the permalink.	← မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး စာအုပ်များ
2 Responses to လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး စာအုပ်များ
ချမ်း says:	April 13, 2013 at 3:22 pm	media fare မှာ မရှိတော့ပါဘူးဗျား ။ဒါကြောင့် ပြန်တင်ပေးလို့ရရင်တင်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်
Reply	mettayate says:	April 14, 2013 at 2:30 pm	ဟုတ်ကဲ့။ ကျမ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ဓမ္မစာအုပ်တွေ ပြန်ရှာတဲ့အခါမှာ လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စာအုပ် (၄) အုပ်ပဲ တွေ့ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်တွေက ကျမ ယခင်တင်ထားတဲ့စာအုပ်တွေနဲ့ တူ မတူတော့ ကျမ မဖတ်ရသေးတော့ မသိပါဘူးရှင်။ ယခုတွေ့ထားတဲ့စာအုပ် (၄)အုပ်ကိုတော့ အသစ်တင်ထားပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျမမှာ မရှိသေးတဲ့၊ ယခု တောင်းဆိုတဲ့စာအုပ်တွေကို ဒီမှာ http://dhammadownload.com/LeDiSayaDawGyi-UNyanaDaza-eBookInMyanmar.htm ဒေါင်းလို့ရပါတယ်ရှင်။
ကျမ ဓမ္မဆိုဒ်ကိုလာလည်တဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။